‘हेगले हल्लिएका प्रचण्ड’ – Rapti Khabar
हिरो बन्ने बाटो त्यो होइन। द्वन्द्वकालीन पीडाको दिगो र न्यायिक निरूपणमा साहसिक भूमिका प्रदर्शन गरेर साँच्चिकै हिरो बन्ने अवसर प्रचण्डसँग अझै बाँकी छ ।
फेरि एकपटक आफैं हेगको हल्ला चलाएर प्रचण्ड ‘हिरो’ बन्न खोजेका छन्। ‘हेग लगे झन् हिरो बन्छ’ भन्ने प्रचण्ड बोलीले यतिबेला राजनीतिक बजार तरंगित भएको छ। उनको यो भनाइ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको छ। ‘हेग हल्ला’ ले उनका दुइटा हैसियत उजागर गरिदिएको छ– पहिलो, राजनीतिक परिपक्वता र सुझबुझको स्तर र दोस्रो, द्वन्द्वकालीन अपराधको पश्चात्ताप।
साउन १३ गते खुमलटारमा विप्लव समूह छाडेर नेकपामा प्रवेश गर्नेहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा प्रचण्डले आफूलाई हेग (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) लगे संसारकै हिरो बन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हेग लगेर पनि मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। हेग लगे भने त म झन् विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु।’
संयोग नै भन्नुपर्छ– त्यही दिन केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार असफल भएको वक्तव्य पनि निकाले। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले निकालेको संयुक्त वक्तव्यमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपाल सरकार अकर्मण्य देखिएको उल्लेख गरेका छन्। प्रचण्डको हेग अभिव्यक्ति र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको वक्तव्यबीच नियोजित सम्बन्ध नभए पनि यसले जनमानसमा एक खालको संशय पैदा गरेको छ। दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले किन एकाएक हेगको हल्ला फैलाए ?
कुन अवस्था र प्रसंगमा प्रचण्डले हेगको कुरा गरे, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रचण्ड सार्वजनिक मञ्चमा किन यति हल्का रूपमा बोल्दैछन् ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। पछिल्लो समय प्रचण्डमा एक प्रकारको छटपटी र बेचैन देखिन्छ। प्रचण्डले हल्ला गरेजस्तो हेगको बाटो त्यति सजिलो भने छैन। नेदरल्यान्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत गम्भीर विषयका मुद्दा हेर्ने गरेको छ। नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नै होइन। त्यसैले यहाँको द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेगको अधिकार क्षेत्र सजिलै पर्ने अवस्था छैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन। यहाँको भूराजनीतिक परिवेश, दुई ठूला छिमेकीको गहिरो नजर र सामरिक चलखेलका कारण पनि त्यो सम्भावना कठिन देखिन्छ।
प्रचण्ड राजनीतिका विचित्र खेलाडी हुन्। जबजब प्रचण्ड चेपुवामा परेको महसुस गर्छन् अर्थात् चेपुवामा पर्ने खतरा देख्छन्, राजनीतिक बजारमा केही न केही फन्डा फालेर हिरो बन्‍न खोज्छन्। हेगप्रकरण पनि त्यसकै निरन्तरता हो। राजनीतिमा नयाँनयाँ समीकरण र सम्बन्ध बनाएर खेलिरहन मन पराउने प्रयोगवादी पात्र हुन् प्रचण्ड। एकै खालको सम्बन्ध र समीकरणमा टिकिरहन र एउटै भूमिकामा अडिन चाहँदैनन् उनी। राजनीतिक मैदानमा मुभ गरिरहने र बेलाबेला झुक्याएर पनि गोल हान्‍न सिपालु खेलाडी हुन्। भूमिगत अवस्थामा होस् वा खुला राजनीतिक यात्रामा उनको दोस्ती र दुस्मनीको शृंखला अनौठो छ। प्रचण्डले ‘भर नभएको एउटा अस्थिर नेता’ को आम आरोप खेप्दै आएका छन्। प्रचण्ड स्वयं भने यसलाई समयले मागेको गतिशीलता र लचकता भनेर बचाउ गरिरहेका छन्।
राजनीतिक समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमा प्रचण्डले विगतमा लिएका कतिपय ‘मुभ’ हरू अस्वाभाविक मात्र होइन, रहस्यमयी पनि देखिन्छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने डिजाइन प्रचण्डले नै तयार गरेका थिए। तर वर्ष दिन पनि नपुग्दै एमालेले भद्र सहमति तोडेको भन्दै प्रचण्ड रातारात कांग्रेससँग मिल्न बूढानीलकण्ठ पुगे। कांग्रेसले एमालेविरुद्ध नयाँ गठबन्धन तयार गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएकै अवस्थामा चुनावको मुखमा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर प्रचण्डले सबैलाई चकित पारिदिएका थिए। एमालेसँग मिलेर चुनावमा सामेल भए, एकीकरण घोषणा पनि भयो तर एकता प्रक्रिया अहिलेसम्म टुंगिएको छैन।
जबजब प्रचण्ड चेपुवामा परेको महसुस गर्छन् अर्थात् चेपुवामा पर्ने खतरा देख्छन्, राजनीतिक बजारमा केही न केही फन्डा फालेर हिरो बन्‍न खोज्छन्। हेगप्रकरण पनि त्यसकै निरन्तरता हो।
बेलाबेलामा प्रचण्ड बोलीले राजनीतिक बजारलाई तरंगित गर्ने गरेको छ। बोलीकै कारण उनी सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि भाइरल बन्‍छन्। चितवन पुगेका प्रचण्डले असार ९ र १० गते दुई दिन नै त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा एकताको समझदारी पालना नभए दुर्घटना हुने वा दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिए। यसअघि प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओली भारत जाँदा पनि प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको प्रसंग बाहिर ल्याएका थिए। २०७६ वैशाख २२ गते कार्ल मार्क्सको २०१औं जन्मस्मृति कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू फेरि जंगल जान तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
२०७५ माघमा चितवन पुगेर प्रचण्डले आफूले फेरि फट्को मार्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एकाएक राजनीति तातेको थियो। नेकपा एकताको ‘फिनिसिङ’ मा देखिएको सकससँगै आन्तरिक कलह चर्किंदै गएको अवस्थामा प्रचण्डबाट शृखंलाबद्ध यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण छ। कहिले हेग गएर हिरो बन्ने, कहिले जंगल फर्किने, कहिले फट्को मार्ने त कहिले भयानक दुर्घटनाको खतरा देख्ने प्रचण्डका यस्ता बोली र व्यवहारले उनको राजनीतिक कद खुम्चिँदो छ। हचुवाका भरमा यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा संक्रमणकालीन न्यायको स्वाभाविक बाटो पनि अरू असहज र जटिल बन्न सक्छ।
द्वन्द्वको पीडा भयानक छ। माओवादी पार्टीको राजनीतिक व्यवस्थापन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। उनीहरूको धैर्य विस्फोट हुने खतरामा छ। ०६३ मंसिर ५ मा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यसबीचको झन्डै १३ वर्षमा मुलुकले धेरै आरोह–अवरोह भोग्यो। अन्तरिम संसद्ले अन्तरिम संविधान बनायो, गणतन्त्र आयो, संविधानसभा निर्वाचन भएर नयाँ संविधान लेखियो, नयाँ संविधानअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय चुनाव भएर राजनीतिक प्रक्रियाले लिक समायो। तर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक समाधानमा राजनीतिक दलहरूबाट जुन खालको गम्भीरता र तत्परता देखिनुपपर्थ्यो, त्यो देखिएन। माओवादीलाई साइजमा राख्न वा पार्टीभित्रको शक्ति संरचनामा चलखेल गर्ने एउटा अस्त्रका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजियो।
यो विषयलाई जति लम्ब्यायो, त्यति नै जटिलता थपिनेछ र यसमा बाहिरी चासो र चलखेल पनि बढ्नेछ। समयमै यसको व्यवस्थापन भएको भए प्रचण्डले हेग लगे हिरो बन्छु भनेर भाषण गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। अहिलेलाई हेग धेरै टाढाको विषय हो। तर राजनीतिक नेतृत्व द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानमा यसरी नै उदासीन र कच्चा व्यवहार देखाउँदै गए पनि एक दिन हेगको भूत साँच्चिकै प्रकट हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार असफल भएको भन्दै एउटा कुनाबाट त्यसका लागि लबिङ पनि भइरहेको छ। त्यसमा बाहिरबाट मलजल थप्ने काम पनि भइरहेको छ। बाहिरी चलखेल एउटा सानो अंश लेनिन बिष्ट पनि हुन सक्छन्। यो संकेत वा सुरुवात मात्र हो। लेनिन सामान्य पात्र हुन्। आफूलाई माओवादीको बाल छापामार बताउने लेनिनले केही समयअघि नेदरल्यान्डको हेग पुगेर एउटा पत्र बुझाएको दाबी गरे। त्यसकै प्रतिक्रियामा प्रचण्डले हतारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ।
द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग झन्डै चार महिना पदाधिकारीविहीन छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटकपटक बैठक भए पनि भागबन्डाको कारण आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग प्रत्यक्ष जोडिएका दाहाल र देउवा आफूअनुकूलका पात्रलाई त्यहाँ पठाएर जोखिम घटाउने रणनीतिमा छन् भने ओलीलाई यो विषयमा खासै हतार र चिन्ता छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधानतिर ओली उदासीनताप्रतिको आक्रोश पनि हुन सक्छ प्रचण्डको हेग धम्की। तर प्रचण्डले जुन शैलीमा हेगको हल्ला फैलाएर सहानूभूति बटुल्न खोजेका छन्, यसले उनलाई नै ब्याक फायर गरेको छ।
शान्तिसम्झौताका प्रतिबद्धताप्रति दलहरू जवाफदेही र इमानदार नबन्दाका परिणाम हुन् यी सबै। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिक दाउमा चर्काउनतिर भन्दा पनि न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधान खोज्नतिर दलहरू लाग्नुपर्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ। द्वन्द्वरत राजनीतिक पक्षबीचको समझदारीमा यसलाई जतिसक्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न दोषीले राजनीतिक डिलमा उन्मुक्ति पाउने खतरातिर नागरिकस्तरबाट जुन चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ, त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ।
हेगको हल्ला चलाएर हिरो बन्ने प्रचण्ड रहन अस्वाभाविक मात्रै होइन उत्ताउलो पनि देखिन्छ। हिरो बन्ने बाटो त्यो होइन। द्वन्द्वकालीन पीडाको दिगो र न्यायिक निरूपणमा साहसिक भूमिका प्रदर्शन गरेर साँच्चिकै हिरो बन्ने अवसर प्रचण्डसँग अझै बाँकी छ, ढिलो भयो भने त्यो पनि गुम्न सक्छ। इतिहासले पनि माफ गर्ने छैन।